Qof walba illoobaa ay password meelaha qaar iyo haddii aad leedahay ma jirto baahi loo qabo in welwelin. Nasiib wanaag aad u Apple ayaa siyaabo dhowr ah si aad u soo kaban karto, sirta ah haddii uu lumo. Waxa kale oo aad qaban karto hanaanka soo kabashada ee siyaaba mid ka badan. Waxaad soo kaban karto, sirta ah ee aad iPhone, iPad, iPod Touch, aad Mac ama xitaa browser web ah.
Waxaa jira dhowr wax kastaba ha ahaatee si aad u hubiso marka aad lumiso password ka hor inta aadan bilaabin argagax. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah;
Hubi haddii aad u xusuustaa ID Apple aad. Haddii aad samayn, kaliya aad dib karaan sirta iyo wanaag si ay u tagaan aad u noqon doonaa.
Haddii aad xusuusan ID Apple iyo password aad, waxay u badan tahay in uu yahay mid la mid ah aad la isticmaalayo sidaa darteed isku day la isticmaalayo aqoonsiga Apple iyo password in ay gasho si ay u iCloud
Hubi CAPS ku xirto tan iyo sirta iCloud waa kiis xasaasi ah oo aad laga yaabaa in lagu password qaldan hab galaan.
Hubi haddii aad xisaabta ayaa disables sababo ammaan dartood. Haa haddii ay tahay, waa in aad Apple ayaa soo diray fariin ku sharaxay this.
Haddii aad u hubiso oo dhan oo ka mid ah oo aad weli ma helaan in aad xisaabta. Waxaad si fudud dib kartaa password. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku samayn kartaa oo aan la doonayo in la eegaya qaar ka mid ah kuwa ugu caansan.
Sida loo joojiyo oo ku password iCloud illoobay la ID Apple aad
Raac tallaabooyinkan fudud si dib illowdeen password iCloud isticmaalaya ID Apple aad.
Tallaabada Koowaad: On qalab aad, abuurtaan Safari oo ka dibna tag iforgot.apple.com
Tallaabada Labaad: Tubada on gala ID Apple aad, geli email hormariyo soo socda ee geeska midig.
Talaabada Sadexaad: qasabadda ku Warbixannada by Email.
Talaabada Afraad: Hubi soo kabashada aad email iyo raac tilmaamaha ku yaal email si ay dib sirta.
Sidee inuu ka soo kabsado ka iCloud password illoobay ka Apple
Raac tallaabooyinkan fudud inuu ka soo kabsado aad iCloud password ka Apple.
Tallaabada Koowaad: Booqo ka webpage ID Apple on your Mac ama PC. Haddii aadan xusuusan password labada ama Apple ID click on "Ilowday aad Apple ID"
Haddii aad guji "Ilowday Password?" Kor ku xusan, waxaa lagu weydiin doonaa in ay galaan ID Apple aad u celi Password ah.
Haddii labada waadna halmaantay, guji "Ilowday ID Apple aad?" Si ay u sii wadaan.
Tallaabada Labaad: Waxaa lagaaga baahan doonaa in aad sidoo kale loo xaqiijiyo aqoonsiga la isticmaalayo su'aalaha ammaanka ama email sugida. Apple kaa caawin doona inaad hesho aqoonsiga haddii aad u halmaanteen la adoo waydiinaya aad caddeyn kartaa aqoonsigaada.
Marka aqoonsigaaga la xaqiijiyo, ka dibna aad abuuri karaan sirta ah oo cusub. Apple waxay u baahan tahay in sirta ah oo cusub waa in aan loo isticmaalay 90-ka maalmood ee la soo dhaafay. Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u abuuraan sirta gaar ah app for barnaamijyadooda u baahan in magacyo iCloud. Taas waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya on "Password iyo Amniga" iyo ka dibna "abuurto ah App- Password gaar ah.
A isticmaalka hal mar oo kaliya dhex mari code la ahbaa doono suuqa kala dhashay. Waxaad isticmaali kartaa code dhaafo in login app ku haboon ee.
Sidaas waxa haddii wax kasta oo aad isku dayi kor ku xusan uma shaqeeyo? Waxaad isticmaali kartaa adeeg sida Elcomsoft baxsadeen oo Phone si aad u hesho shubo xisaabta iCloud xitaa haddii aad u halmaanteen la sirta.
Waa maxay Elcomsoft baxsadeen oo Phone samayn kartaa
Elcomsoft baxsadeen oo Phone kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan iCloud xitaa aan ID Apple ama password. Software Tani waxay sidaas sameeya iyada oo la samaynaayo isticmaalka calaamo binary sugida in loo abuuray by Apple iCloud Control Panel si ay u gasho in aad xisaabta iCloud. Qaar ka mid ah muuqaalada Elcomsoft Phone-qabtaha waxaa ka mid ah;
Kaa caawinaysaa in aad helaan macluumaad ku kaydsan afgarasho qalabka macruufka
Decrypt iPhone hayaan la password la yaqaan
La jaan qaada dhammaan qalabka macruufka iyo dhammaan versions of Lugood.
Meel ku Macdan iCloud hayaan la ID Apple.
Kuu ogolaanayaa inaad Download xog dheeraad ah oo ka soo kabsado dhawaan account iCloud.
Waxaa muhiim ah in si kastaba ha ahaatee la soco in Elcomsoft kaliya ee Windows shaqeeyaa inuu ka soo kabsado sirta ah. Waxa kale oo xusid mudan in haddii aad u baahan tahay nidaam password iCloud sugida laba tallaabo ah, Elcomsoft baxsadeen oo Phone ma awoodi doono inuu ku caawiyo.
Waxaa si kastaba ha ahaatee waa adeeg muhiim u ah kuwa ilowday labadaba ay ID Apple iyo password ka dib ay account iCloud hesho.
Fiiri Elcomsoft halkan, https://www.elcomsoft.com/eprb.html
> Resource > iCloud > Ilowday Password iCloud? Waxyaabaha la sameeyo si ay dib-u helin